Sixirka Biyaha Gabiley oo Cirka Isuku Sii Shareeray iyo Moogaan La,aanta Golaha Deegaanka Gabiley |
Sixirka Biyaha Gabiley oo Cirka Isuku Sii Shareeray iyo Moogaan La,aanta Golaha Deegaanka Gabiley
Gabiley-(GNN)-Halka mitir kuyuub ee biyaha gabilay qiimaha bulshada reer gabilay lagaga iibiyaa waa 12,000sl, halka magaalada xeebta bada cas ku taal ee berbera halka 1 mitirkuyuub bulshada kulaylku wehelka u yahay lagaga iibiyo 4500 sl shilling kaliya?
Hubaal waxa ah in dad badan SL gudo iyo dibadba joogaa is waydiinayaan waa maxay sababta ay biyaha gabilay uga qiimo bateen ama labanlaab iyo dheeraad uga qiimo bateen magaalada xarunta u ah gobolka saaxil oo dad iyo duunyaba aanay 10 daqiiqo biyo la’aan noolaan Karin lixda bilood ee xagaaga ama waqtiga kulaylaha?.
Biyaha ama ceelka laga qoday waxaa la ogyahay in waqfi uu u bixiyay muwaadinkii lahaa
Riiga ceelasha lagu qodayna waxaa uu ahaa riigii ay boqortooyada kuwayt ugu deeqday xukuumada JSL.
Beebka noocyadiisa kala duwan iyo mishiinada ceelasha biyaha ka soo tuura waxaa ku deeqay hay’adaha qaadhaan bixiyayaasha reer yurub sida Unicef IWM.
Guri kasta oo ku yaala magaalada gabillay waxaa laga qaaday (5) shan doolar lacagtaas oo qayb ka mid ahayd kharashkii ku baxay qodistii dhulka ee dhulkii beebka la soo dhigay lagana soo jeexay seeska ceelasa botor oo ah beerta ceelashu ka qodan yihiin ilaa taangiga kaydka biyaha ee ceelasha oo laga dhigay koonfurta gabilay.
Sidaa ay tahay ayaa waxaa ka arrinsaday kooxo aan dan umadeed ka arrimin balse lagu tilmaami karo danaystayaal kaligood jirayaal ah, kuna takhasusay sida looga ganacsado dheecaanka wadhatada dan yarta u badan , kuwaas oo ay hormood ka ahaayeen NGOyada dilaal ku noolka ah.
Kaalinta labaadna waxaa matalayay ayaynu odhan karnaa maamulkii waqtigaa D/hoose ee gabilay ka arriminayay balse balanqaadyo iyo heshiisyo qarsoodi loo galay ku qalin taraareyay saxeexii iyo ogolaanshihii hantidii umadu lahayd uu ku ogolaaday in koox kaligood is boqray ka ganacsato.
Kaalinta saddexaad waxay noqdeen kooxda iyagu gacanta ku haysa maamulka iyo ka ganacsiga biyihii iyo xuquuqdii ay bulshada reer gabilay kala sinaayeen , isla markaana markii ay waayeen cid xukuumada dhexe ah iyo D/hoose oo danbe cid kala xisaabtanta iyo cid ka danqata mushkilada bulshada danyarta u badan ku habsatay waayeen ayay sidii hanta ay kaligood leeyihiin u maamuleen ilaa maantana ku haystaan.
Waxaa xusid gaara mudan shirqoolkii bulshada reer gabilay loo maleegay mid la mid ah in isla waqtigaa loo maleegay bulshada reer berbera balse nasiib wanaaga ka dhiidiyeen in koox naxariista ka fog iyo koox danaystayaal ah ay hay’ada shisheeye iyo maamulkii D/hoose waqtigaasi baahidii umadeed iyo xuquuqdii dada u sinaayeen in koox gacanta loo galiyo.
Waxaa xusid gaar ah mudan in biyaha oo tiirka koowaad ee noolaha ah sida ilaahay SWT kitaabkiisa casiiska ah inoogu sheegay ,ayaa haddana distoorka qaranka JSL ay ku cadahay in biyuhu kow ka yihiin baahiyaha aas-aasiga ah ee ay xukuumada dhexe masuuliyadeeda leedahaay isla markaana bulshadu ay xaq iyo xaquuq ugu leedahay inay baahidooda biyood, caafimaad, waxbarasho ka hesho xukuumada dhexena tahay ta iyadu u fidinayso bulshada ay xukunto.
Marka dhinaca kale laga eegana biyahan gabilay waxaa si aan distoorka qaranka waafaqsanayn loogu hibeeyay shirkad la sheegay inay ku shuraakoobeen koox ganacsato ah ayaa waxaa muuqata in dadkii markii hore wada lahaa ay badankoodii ka noqdeen sheerkii loo qoondeeyay isla markaana qaybo aan la xidhiidhnay sheegeen inay ka baxeen waqtigana ay qayb yari maamulato ilaa hadana ay gacantooda ku jirto. Isku soo wada duuboo iyaga oo heshiiskii sharci darada ahaa ee kooxdani kula wareegeen biyihii umadau lahayd uu ku eg yahay 2014ka ilaa 2010 kiina ay iyagu maamulayeen isla markaana dhinaca duqaytida iyo waxgaradka gobolka gabiley dhawr jeer u gudbiyeen dhinaca xukuumadan M/wayne siilaanyo in biyaha gabilay ay noqdaan biyo xukuumadau maamusho oo wasaarada macdanta iyo biyuhu la hoos geeyo ayaan wax jawaab waafi ah laga helin.
Waxaa kaloo lama huraan noqonaysa in maamulka golaha Deegaanka Gabiley M/Amiin Cumar Cabdi ee bulshadu soo doooratay uga fadhiyaan inay talaabo ku haboon oo biyaha gabilay u noqon lahaayeen biyo Dadka lacagta leh iyo kuwa saboolka ahba u siman looga dhigi lahaa .
sidoo kale intaan laga wareejin waa in xukuumada dhexe iyo golaaha degaaanku baadhis dhab ah ku sameeyaan mood iyo nool wixii kooxdani la wareegtay wixii ku maqnaadana sharcigana la waafajiyo.